Uphetheni Esandleni? Zilungiselele ngalokho onakho - Bayede News
Ezinsukwini ezedlule ngilalele ingoma kaDladla Mshunqisi, ongumculi odumile, engishiye ngicabanga kaningi. Angikuveze ngokusobala ukuthi angiqondile ukudayisa ingoma kaDladla Mshunqisi kulesi siqephu sanamuhla, futhi angiyena nomlandeli wakhe oqavile.
Engikubambile engomeni yakhe yilo mbuzo othi; “Uphetheni esandleni?” Lo mbuzo ngiwubone ubalulekile kulo nyaka omusha. Ngizibuze kaningi nami futhi ngiyafisa ukuthi nawe uhlale phansi uzibuze lo mbuzo. Ngicabanga ukuthi akudingi ukuthi ube nemali ukuze uzibuze lo mbuzo. Wonke umuntu angawubuza futhi kumele azibuze wona.
Kulesi sikhathi sonyaka abantu abaningi babhala imigomo abazibekela yona kulonyaka njengoba bayibhala ngonyaka odlule. Into ebuhlungu ukuthi iningi lethu asikwazanga ukufeza amaphupho ethu ebesiwabhale phansi nebesizibekele wona ngonyaka odlule. Lokhu kungenze ngazibuza ukuthi yini eyenze ngingaphumeleli kweminye yemigomo ebengizibekele yona.
Ngithe uma ngilalela ingoma kaDladla ngabona ukuthi isizathu esikhulu yimi uqobo. Iqiniso lithi ukhuvethe luphazamise izinhlelo zethu eziningi kodwa kukhona abaphumelele noma ukhuvethe belubashayile njengathi. Ngizibuzile ukuthi yini lena abayenzile ehlukile nengihluleke ukuyenza. Kungikhanyele bha ukuthi inkinga yimi.
Ngizwe kahle, angisho ukuthi izinkinga bezingekho kodwa ngizibonile ukuthi ngehluleke ukubona ukuthi ngiphetheni esandleni. Izinkinga kanye nokhuvethe azilutho uma wazi ukuthi uphetheni esandleni. Iningi lethu sinazo izixazululo zezinkinga esibhekana nazo kodwa asikwazi ukukubona lokho.
Into ebalulekile akusikho ukubhala imigomo kanye nemibono kulonyaka, kodwa kubalulekile ukuthi singagcini lapho. Kubalulekile ukuthi uma ubhale phansi izinto ofisa ukuzenza kanye nofisa ukuzishintsha empilweni yakho kulonyaka, ubhale nalokhu okulandelayo. Bhala phansi umhlahlandlela wakho konke ozifisela khona kanye nofisa ukukushintsha. Uma ungenawo umhlahlandlela, wonke amaphupho onawo kulonyaka afana nezifiso nje! Ukubhala umhlahlandlela wenza kubelula ukubona ukuthi le nto oyifisayo ingenzeka noma ngeke yenzeke. Uma ungenawo umhlahlandlela wamaphupho akho ufana nomuntu othatha uhambo engazi lapho eyakhona.
Ngemuva kokubhala phansi umhlahlandlela, kubalulekile ukuthi uzibuze futhi ubhale phansi konke okuzodingeka ukuze kufezeke lawo maphupho onawo kulonyaka. Angikwenzele isibonelo ngomfundi ofuna ukuphasa umatikuletsheni wakhe nonyaka. Kuzomele abhale phansi izifundo zakhe, abhale imaki afuna ukulithola esifundweni ngasinye, abhale ukuthi yini ezodingeka ukuze athole lawa mamaki awabhalile kanye nokuthi yiluphi usizo azoludinga. Uma ubhale umhlahlandlela uzibeka ethubeni lokungaphoxeki futhi akulula ukuthi wenze izinto ongazi ukuthi uzenzelani.
Impumelelo yakho isesandleni sakho, kungakho ngikubuze ukuthi uphetheni esandleni. Okuphethe esandleni kungakwenza uphumelele noma ungaphumeleli kulo nyaka. Kukhona abantu abaphethe izinto ezizobalimaza, zilimaze labo abaseduze nabo. Kukhona abaphethe amanga, abaphethe inhliziyo embi, abaphethe ukubukela phansi abanye abantu, ukuzazi bona kanye nokungafuni ukusizwa. Bonke labantu engibabalile amaphupho amahle ngempilo yabo angeke asho lutho.
Abakuphethe esandleni yikho kanye okuzobadixilela phansi kulonyaka. Angeke ngakushayela umthetho ukuthi phathani esandleni kodwa engifisa ukukhumbule ukuthi okuphethe esandleni kunamandla okukuphumelelisa kanye nokukudonsela phansi.
Ukube benginguwe bengingahlala phansi ngizibuze ukuthi iziphi izinto ezizokubambezela kulonyaka. Ngifisa ukukubona ufinyelela emaphusheni akho onawo kulonyaka. Ukuzenyeza kanye nokubukela phansi okuphethe esandleni, amandla owanikwe ngumvelinqangi yikho kanye okuzokwenza ukuthi lonyaka ufane neminyaka eminingi edlule.
Bengikhuluma nomakoti ngamaphupho esinawo kulo nyaka kanye nezinto engifisa ukuzibona zenzeka ekhaya lethu ezinsukwini ezedlule. Ngithe uma ngingabaza ukuthi ezinye zezinto esizibalile zibukeka zingeke zenzeke wathi “ukuzama kumahhala”. Ngiwathandile la magama futhi ngiyafisa ukuthi nawe uwacabange. Into abeqonde ukuyisho ukuthi, noma kungabukeka kulukhuni futhi kunzima ukufezekisa amanye amaphupho kulawa ebesiwabala kodwa ukuzama ngeke kwasibulala ngoba ukuzama kumahhala.
Omunye wabaluleki wathi “kungcono ukuzama uhluleke kunokuhluleka ukuzama”. Kulo nyaka asizame sengathi asihlulekanga ngonyaka odlule. Phumela emnyango wenze izinto ngendlela ehlukile kunalena owenze ngayo ngonyaka odlule.
nguSanele Gamede Jan 14, 2022